सिन्धुपाल्चाेकमा मिनीट्रक दुर्घटना, दुर्इकाे मृत्यु | eDainik Post
Fri 23/02/2018 | शुक्रबार ११/११/२०७४
सिन्धुपाल्चाेकमा मिनीट्रक दुर्घटना, दुर्इकाे मृत्यु
चौतारा- सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नपा– ५ चौतारामा गएराति मिनीट्रक दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
उक्त वायुको प्रभावसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य असरले आज खासगरी देशभरका पहाडी भेगमा बदली र एक÷दुई स्थानमा हल्का वर्षा गराउने मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपत्यकाको उत्तरी भेगमा बढी बदली रहेको र मेघ गर्जनसहित बाक्लो बादल बनेकाले हल्का वर्षा हुनेछ । अहिले मध्यपहाडी भेगमा बढी बदली रहेको छ भने काठमाडौँका कतिपय स्थानमा छिटफुट वर्षा भइरहेको छ ।
प्रेसर कुकर बम विष्फोट, एक घाइते
लहान- लहान नगरपालिका– १ मारुती होटल नजिक अनिल अग्रवालको किराना पसलमा आज दिउँसो १ बजे प्रेसरकुकर बम पड्किएको छ । बमबाट ४२ वर्षीय अनिलकुमार अग्रवालको गर्धन र निधारमा चोट लागेको छ । किराना पसलको सामान क्षति भएको छ । उक्त बम जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीले राखेको सशस्त्र प्रहरी बल वेश कार्यालय लहानले जनाएको छ ।
खोटाङका २३ वडा सचिव विहिन, गाउँ जान छोडेर स्वइच्छिक अवकाश रोज्छन् कर्मचारी
खाेटाङ- खाेटाङका विभिन्न गाउँपालिकाको २३ वटा वडा सचिव विहिन भएका छन् । जिल्लाबाट कर्मचारीहरुले सरुवा लिने तथा स्वइच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीकाे लर्को लागेपछि ति वडाहरु सचिव विहिन बनेका हुन । कर्मचारी नभएको भन्दै जिल्ला समन्यव समितिले ति वडाहरुमा सचिव खटाउन नसक्दा वडाको सबै प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेका छन्। कतिपय वडा त कार्यलय सहायकको भरमा समेत चलाइएको छ भने केही वडाहरुमा त झन् पुननिर्माणमा खटिएका सहायक प्राविधिकलाई प्रशासनको काममा खटाइएको छ । सरकारले घरदैलोमा सिंहदरबार पुर्याउने भने पनि त्यही सिंहदरबारले अहिलेसम्म वडामा सचिव खटाउन नसक्दा स्थानीयहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
खाेटाङकाे जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका वडा सचिव विहिन, कार्यलय सहायक र प्राविधिकले गर्छन् सचिवकाे काम
खाेटाङ- खाेटाङका विभिन्न गाउँपालिकाको २३ वटा वडा सचिव विहिन भएका छन् । जिल्लाबाट कर्मचारीहरुले सरुवा लिने तथा स्वइच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीकाे लर्को लागेपछि ति वडाहरु सचिव विहिन बनेका हुन । कर्मचारी नभएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले ति वडाहरुमा सचिव खटाउन नसक्दा वडाको सबै प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेका छन्। कतिपय वडा त कार्यलय सहायकको भरमा समेत चलाइएको छ भने केही वडाहरुमा त झन् पुननिर्माणमा खटिएका सहायक प्राविधिकलाई प्रशासनको काममा खटाइएको छ ।
पिडितलार्इ अार्थिक प्रलाेभन दिएर बलात्कारको घटना मिलाउने दुईजना पक्राउ
काठमाडौँ- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा २०७४ कात्तिक÷मंसिर महिनामा सञ्चालित व्यवस्थापन संकायतर्फको स्नातकोत्तर तह (एमबिएस) दोस्रो वर्ष २०७३ सालको परीक्षाको परीक्षाफल केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार प्रकाशित गरिएको छ ।
तपार्इ अाजकाे दिन कस्ताे रहनेछ , जान्नुहाेस् अाजकाे राशिफल
मंगलबारे, इलाम- इलाम नगरपालिका– ५ बिब्ल्याँटेमा आज एक व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । सागर हेमरोन नाम गरेका व्यक्ति बिब्ल्याँटेको पेट्रोल पम्प अगाडि मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । मिठाइ पसलमा काम गर्ने उनी आज बिहान करिब ९ बजे मृत अवस्थामा फेला परेपछि स्थानीयवासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । झापा गौरीगञ्ज घर भएका हेमरोन एक महिनाअघिदेखि उक्त पसलमा काम गर्दै आएको जिल्ला पहरी कार्यालय इलामले जानकारी दिएको छ । प्रहरी इन्सपेक्टर रामेश्वर पण्डितका अनुसार घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
न दक्ष चिकित्सक छन्, न त अाैषधी नै, जोखिम मोलेरै प्रसूति सेवा दिइरहेकाे छ जिल्ला अस्पताल
दक्ष चिकित्सको अभावमा अस्पतालमा शल्यक्रियाबाट हुने प्रसूति सेवा बन्द छन् भने औषधि अभावमा अस्पतालबाट निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने ३५ प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांश औषधिको वितरण रोकिएको छ । शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउने (सिएस) सेवा बन्द छ । पैँतीस प्रकारका निःशुल्क रुपमा वितरण गरिने औषधिमध्ये पाँच सात प्रकारका औषधिमात्र रहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सन्तोषकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।
बिना ब्यायाम नै तौल घटाउने घरेलु फर्मुला यस्ताे छ
टेलिकमकाे फ्रिडम प्याक अफर, एक घन्टासम्म अनलिमिटेड कल, म्यासेज र डाटा चलाउन पाउने
नेपाल टेलिकमले फ्रिडम प्याक अफर ल्याएको छ। फागुन ७ गतेकाे प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुका लागि ‘फ्रिडम प्याक’ उपलब्ध गराएको हो । कम्पनीका जीएसएम र सीडीएमए मोबाइलका ग्राहकहरुले सो प्याकको उपयोग एक घण्टासम्म अनलिमिटेड रुपमा गर्न सक्ने छन् ।
NTC प्रयाेगकर्तालार्इ खुसीकाे खबर,फ्रिडम प्याक अफरमा एक घन्टासम्म अनलिमिटेड कल, म्यासेज र डाटा चलाउन पाउने
अब किबाेर्ड अाैलाले थिच्नुपर्दैन, हेर्नुस् कसरी चल्छ ?
इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न सर्वोच्चको आदेश
प्रेमिका गर्भवति भएपछि उपप्रधानमन्त्रीको पद धरापमा !
के अाफ्नाे मन्त्रालय कटाएर भएपनि फोरमलार्इ सरकारमा ल्याउनेछ गठबन्धन ?
गृहका लागि माओवादीभित्र हानथाप, एमालेलार्इ १०, माओवादीलाई सात मन्त्रालय, (हेर्नुस् सूची सहित)